Akụkọ - A na-ejikarị turf artificial, ịchọrọ ịmara ụdị ya na ebe a na-etinye ya?
A na-ejikarị turf artificial, ịchọrọ ịmara ụdị ya na ebe itinye ya?
Site na mmepe ngwa ngwa nke ahịhịa artificial na afọ ndị na-adịbeghị anya, ọ bụrụla akụkụ dị oke mkpa nke ndụ ndị mmadụ kwa ụbọchị, ma ọ bụ n'ụlọ ahịa, ụlọ akwụkwọ mahadum, ụlọ ọrụ ọfịs ma ọ bụ ebe obibi.
E nwere ụdị dị iche iche nke njikwa turf. Nke mbu, ahihia ahihia nwere ike kesaa n'ime obere, ọkara na ogologo ahihia dika ogo ha si di. Ogologo ahịhịa dị mkpụmkpụ bụ 10 mm n'ozuzu, nke kwesịrị ekwesị maka gburugburu ịdị ọcha gburugburu ogige basketball, ogige tennis na ọdọ mmiri. Ugbo ahihia di ihe dika 20 rue 35 mm ogologo ma enwere ike iji ya dika ala nke hockey, badminton na ahihia ahihia. Ogologo ahịhịa dị ogologo nwere ike iru 30-50 mm, a na-ejikarị ya eme egwuregwu na bọlbụ na egwuregwu ịgba ọsọ.
Turdị ihe ntanetị maka football football
Nkewa ma jikwaa dịka ọdịdị nke ahịhịa, enwere ike kee ya n'ime waya kwụ ọtọ, waya gbagọrọ agbagọ, na waya akpọrepu. Ma ọ bu nhazi ala n’elu mbara ihu dị ndụ, ma ọ bụ iwu ụlọ tenis na ubi basketball, ọnụahịa ahịhịa kwụ ọtọ dị ọnụ ala, a na-ejikwa ya eme ihe n’ezie, ma ọ bụ nhazi ala n’elu elu nke ndụ mbara ihu ma ọ bụ tenis. Enwere ike iji ụlọ nke ogige na basketball nwee ike. Ahịhịa a na-ahịhịa ahịhịa nwere ahịhịa dị nro, nke nwere ike belata mmetụta nke ndị na-eme egwuregwu mgbe ha dara ma daa, n'ihi ya, a na-ejikarị ya eme egwuregwu dị ka ebe egwuregwu bọọlụ ọkọlọtọ.
Na-ejuputa ahihia wuruwuru
Ka ọ dị ugbu a, usoro nhazi ọkwa na-ejikarị arụ ọrụ turf na-ahazi ma jikwaa ya dịka teknụzụ nhazi ya. N'ozuzu, e nwere ụdị abụọ, ụdị envelopu na ụdị ịkwa akwa artificial. Ihe a na-enyo enyo bụ ahịhịa ata nwere ogologo 10mm ruo 56mm, nke a ga-agbanwe na uche ya dịka mkpa nke saịtị ahụ ma ọ bụ ihe ndị ahịa chọrọ. A na-agbakwunye quartz ájá, ahụ EPDM, wdg. Shapedị ahụ yiri nke ahịhịa ndụ dị ọcha. O kwesịrị ekwesị maka nhazi nke ogige artificial na mbara ala dịpụrụ adịpụ. Uwe a kpara aka na-ejikarị eriri naịlọn arụ ọrụ, na teknụzụ nhazi ahụ dị mgbagwoju anya. Ọnụahịa ya dị oke ọnụ karịa nke ahịhịa na-ekpuchi. Agbanyeghị, ahịhịa nwere ịdị n'otu ka mma, sie ike ma sie ike, ọ dịkwa mma maka mahadum na oge ndị ọzọ.
Tụlee ezigbo ihe kpatara 7 iji jiri ahịhịa adịgboroja
Ndi ahịhịa gị na-aghọ ezigbo ihe mgbu na ahịhịa? Ọ bụrụ n ’ọrụ ezumike gị enweghi ngwụcha nke izu ụka, izu ike, ịmị mmiri, ahịhịa, wdg, yabụ na oge eruola ka ị tụlee turf. Arf turf na-aghọ nhọrọ bara uru ma na-ewu ewu maka ịchọ mma gburugburu ebe obibi, mana ọ dị gị mma? Lee ụfọdụ ihe ga-enyere gị aka ịza ajụjụ a.
Nchekwa mmiri nwere:
Ego ị na-agba ahịhịa ahịhịa ndụ dị oke elu ugbu a, na $ 200 kwa acre kwa ọnwa. Ọ bụghị naanị nke ahụ, Mbelata nke mmiri na mmachi ndị na-esi na ya pụta n'ọtụtụ mpaghara nke mba ahụ pụtakwara na a gaghị enwe oke mkpofu na ahịhịa akpịrị na-akpọ nkụ. N'ebe a, turf artificial na-enye azịza: a na-edochi ụkwụ ọ bụla nke turf nkịtị, na-echekwa galọn mmiri 55 kwa afọ. N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, ka ị na-echekwa mmiri dị oke ọnụ ahịa, ị ga-enweta akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ ịchọrọ.
Ihe ndị na-akpatakarị nrịanrịa n'oge a kara aka? I kwutere ya: Ahịhịa, imi na-agba agba, anya ncha, ụkwara na mgbaàmà ndị ọzọ dị n'akụkụ ọgwụgwọ ahịhịa maka ndị na-arịa ahịhịa. Arfik nke artificial nwere ike iwepu allergens, na-enye gị ohere iku ume kpamkpam n'emeghị ọgwụ ọ bụla.
Likemụaka na-enwe mmasị ịgba ọsọ, ịwụ elu, na igwu n'èzí, ha niile na-atọ ụtọ ruo mgbe egwuregwu dị na ahịhịa nwere ọgba aghara. Maka ndị nwe nkịta, mmebi ahụ nwere ike bụrụ nke ka njọ karịa, ka mkpofu anụ ụlọ na-emebi ọtụtụ ụdị ahịhịa. Kama ịnwa ịtọ ahịhịa na gburugburu ebe siri ike, tụlee iji turf artificial, n'ihi na ahịhịa artificial na-adịkarị lush ma na-enye elu dị nro ma dị mma maka mkpịsị ụkwụ nke obere ụkwụ.
O nwere ike ịbụ na ị nụla na ezigbo ezinụlọ na-acha akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ bụ ezinụlọ na-enweghị ahịhịa ndụ. A ga-enwerịrị ụfọdụ eziokwu n'echiche a. Site na iwepu mkpa ọgwụ na-egbu ihe na-egbu egbu ma zere nsogbu ọ nwere ike ibute site na njikọta spam, turf artificial nwere mmetụta dị mma na gburugburu ebe obibi. Adị na-adịgboroja ga-ebelata ahịhịa dị na mbara ezi ahụ, n'ihi na ịghara ịkọ ihe pụtara na enweghị mpempe ahịhịa nwere ike iweta n'akụkụ ụzọ iji kpokọta ahịhịa. Ọzọkwa, e ji ọtụtụ ihe a pụrụ imegharị emegharị ahịhịa ndị e ji aka dee mee, dị ka taya ochie roba ndị a na-ezigara ebe a na-ekpofu ahịhịa.
Evergreen na-enweghị ìhè anyanwụ:
Okporo ámá ndị nwere osisi mara mma, mana ị chọrọ ịgha ahịhịa n'okpuru ndò niile? Ọ bụghị ọtụtụ. Ọbụna ahịhịa a na-akpọ "onyinyo" siri ike ito n'okpuru osisi ma ọ bụ n'akụkụ ebe ndo. Artik wuru abughi nsogbu. Nwere ike ọ bụghị naanị itinye "ahịhịa" a na ndò nke ogige ahụ, kamakwa iji ya na ebe ndị na-abụghị ọdịnala (dịka mkpọda nkume ma ọ bụ ájá ájá).
Ọ dịghị trimming chọrọ:
Otutu lawns chọrọ a otutu ngwaọrụ, gụnyere ahịhịa mowers, trimmers, sprinkler, pavers, wdg Ma ozugbo keakamere turf arụnyere, i nwere ike ikwu goodbye na niile akụrụngwa na hapụ ohere dị mkpa maka ụgbọala ma ọ bụ ụlọ.
Ọ dịghị mkpa ka ị nọgide na-enwe:
Mgbe emechara nlezianya, a ga-eji turf artificial mee ihe na-aga n'ihu maka ihe karịrị afọ 15 n'okpuru iji ihe dị arọ, gụnyere omume ike kwa ụbọchị. Nke a anaghị achọ mmezi, naanị nhicha na ọkpọkọ mmiri mgbe niile. Nnukwu ọrụ nke ịkwa osisi, ịwepụ ahịhịa, ịgha mkpụrụ, ịzụlite, na ịgbara mmiri abụrụla ihe mgbe ochie, na-enye gị ohere ịnụ ụtọ oge na mbara èzí ahụ n'ebughị ụzọ lekọta ya.
N'okwu, turf artificial na-aghọwanye ewu ewu n'etiti ndị na-azụ ahịa. Ọ bụrụ na ị chọrọ ịmatakwu banyere wuru turf, biko kpọtụrụ anyị!